WALWAL CUSUB: Cristaino Ronaldo Hooyadii Maria Dolores Aveiro Oo Si Wayn Dabka Ugu Sii Shiday Hadalkii CR7 Ee Kadib Finalkii Champions League. – GOOL24.NET
WALWAL CUSUB: Cristaino Ronaldo Hooyadii Maria Dolores Aveiro Oo Si Wayn Dabka Ugu Sii Shiday Hadalkii CR7 Ee Kadib Finalkii Champions League.
Xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Real Madrid ee Cristaino Ronaldo ayaa daqiiqado kadib finalkii UEFA Champions League ee magaalada Kiev ka dhacay sabtidii waxa uu saxaafada ka sheegay war dhul gariir ku noqday qolka labiska iyo kooxdiisa Real Madrid kadib markii uu sidii wax tagay u isticmaalay in ay farxad u ahayd in uu Real Madrid ka soo ciyaaray.
Ronaldo oo erayo waqtiga tagay oo kale ah u isticmaalay Real Madrid ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay in marka uu xulka qarankiisa Portugal la midoobo uu wax walba kala cadayn doono iyo waliba mustaqbalkiisa isaga oo muujiyay sida uu u doonayo in uu Madrid ka baxo.
Laakiin markii ciyaartoyda kooxdiisa Madrid ay si wayn ugu dhaliileen in uu farxadii kaga ciyaaray waxa uu Ronaldo qirtay in waqtiga uu hadalkan sheegay ahaa mid aan ku haboonayn balse uu waqtigeeda la sugi doono balse Ronaldo hooyadii Maria Dolores Aveiro ayaa sii hurisay dabkii uu wakiilkeedu ku shiday mustaqbalkiisa Madrid.
Maria Dolores Aveiro ayaa muujisay sida ay u jeceshahay magaalada Paris waxayna soo dhawaysay haddii uu wiilkeedu ku biiro kooxda ree France iyada oo dib u xusuusatay waqtigii ugu danbeeyay ee iyada iyo Ronaldo ay ku sugnaayeen magaalada Paris ee dalka France oo ahayd markii uu abaal marinta Ballon d’Or uu ku soo qaatay.
Kooxda PSG ayaa la sheegay in ay Ronaldo u soo bandhigtay mushaar uu kula mid noqonayo xidigaha ugu mushaarka qaalisan ee Lionel Messi iyo Neymar Jr taas oo ah waxa ugu wayn ee uu kaga cadhaysan yahay maamulka kooxdiisa.
Ronaldo ayaa aaminsan in mushaarkiisu uu ka bato Lionel Messi iyo Neymar Jr ama ugu yaraan uu la mid noqdo halka uu hadda si wayn uga hooseeyo xidigo uu arko in uu ka fiican yahay, laakiin maamulka Real Madarid oo muddo dheer wada xaajood kula jiray wakiilada Ronaldo ayaa arintan ka cago jiidaya taas oo cadhada Ronaldo qarxisay.
Haddaba Cristaino Ronaldo hooyadii Maria Dolores Aveiro oo wararka wiilkeeda la xidhiidhinaya PSG sii hurinaysa ayaa tidhi: “Anigu waan jeclahay Paris, waxaan imaanayaa hadda iyo mar kale, markii ugu dambeyay waxay ahayd markii isaga la gudoonsiinayay Ballon d’Or. Waxay ahayd farxad wayn. Marka aan halkan imid qof walba wuxuu iila dhaqmay si fiican”
Maria Dolores Aveiro oo ka hadlaysa sida uu dareenkeedu noqon karo haddii wiilkeeda Cristiano Ronaldo uu ku biiro PSG ay tidhi: ““Miyaan ku qanasanahay inuu PSG ku biiro?, daacad ahaantii, igama cadheysiin doonto hadii uu sidaas sameeyo, balse anigu waxaan doorbidi lahaa inuu dib ugu laabto magaalada Manchester”.
Waxayna hooyada dhashay Ronaldo muujisay in halkii uu PSG ku biiri lahaa wiilkeedu in uu dib ugu laabto kooxdisiii hore ee Manchester United oo ka mid ahayd kooxaha waqti dheer doonayay in ay la soo saxiixdaan Ronaldo.
Si kastaba ha ahaatee, maalmaha soo socda waxaa la sugayaa waxa uu Ronaldo u sheegi doono taageerayaashii uu sheegay in ay markasta garabkiisa taagnaayeen ee uu u balan qaaday in uu waxyaabo badan u kala cadayn doono.